आज सिक्किम र आर्मी भिड्दै – Khel Dainik
आज सिक्किम र आर्मी भिड्दै
इलाम (खेलदैनिक) । इलाममा जारी चौथो माइ भ्याली गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा युनाइटेड सिक्किम एफसीले दावेदार त्रिभुवन आर्मी क्लबको सामना गर्दैछ । तेस्रो क्वाटरफाइनलतर्फ आज हुने खेलमा धेरैले आर्मीलाई नै बलियो प्रत्याशी मानेका छन् ।
इलामस्थित ठूलो टुँडीखेल मैदानमा हुने आजको खेलमा सिक्किम पनि सकारात्मक नतिजा निकाल्नेमा आशावादी छ । आफ्नो पहिलो खेलमा सिएमजी संकटा क्लबलाई अप्रत्याशित रुपमा हराउँदै क्वाटरफाइनल प्रवेश गरेको सिक्किम आजको खेलमा आत्मविश्वासी पनि छ ।
दिनको ठिक ३ बजे हुने आजको खेलमा सिक्किमले आर्मीलाई पनि स्तब्ध तुल्याउला त ? कति होला आजको नतिजा ? अनुमान लगाउनुहोस् ।
← विश्वचर्चित अमेरिकी गल्फर टाईगर उड्ससँग प्रतिमाको भेट प्रभावशाली जितका साथ आर्मी अन्तिम चारमा →
प्रतिष्ठित इलिट वुमन रेफ्री प्यानलमा अन्जना बैशाख १२, २०७५
किरनको टोली माजियाको लगातार दोस्रो जित बैशाख १२, २०७५
रोहितको टोलीसँग रोनाल्डिन्होको टिम पराजित बैशाख १२, २०७५
एभनिरलाई हेमजा गोल्डकपको उपाधि बैशाख १२, २०७५
एन्फा उपाध्यक्ष केसीलाई गृहजिल्लामा भव्य स्वागत बैशाख १२, २०७५
मैत्रीपूर्ण खेलमा एनआरटीको रोमाञ्चक जित बैशाख १२, २०७५